मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो खण्डको काम शुरु, दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौंमा झार्ने | गृहपृष्ठ
Home समाचार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो खण्डको काम शुरु, दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौंमा झार्ने
असार २, मेलम्ची । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो खण्डको काम शुरु भएको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा आयोजनाभित्र पर्ने जग्गाको सरकारले अधिग्रहण शुरु गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा याङ्ग्री र लार्केखोलाको पानी मिसाएर काठमाडौं लैजानको लागि सरकार लागिपरेको हो । पहिलो चरणमा मेलम्ची आयोजनाले दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौंमा झार्नेछ । त्यसैगरी याङ्ग्री र लार्केखोलाबाट पनि १७/१७ करोड लिटर पानी लैजाने सरकारको लक्ष्य छ । यो योजना पूरा भए मेलम्चीबाट अहिले लैजान लागिएको पानी तेब्बर क्षमतामा विस्तार हुनेछ ।
याङ्ग्री र लार्केखोला क्षेत्रभित्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा लिनका लागि सूचनासमेत जारी गरिएको छ । पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने ३७६ कित्ता जग्गा र सो जग्गामा पर्ने बोटबिरुवा, बालीनाली, गोठटहराको मुआब्जा वितरण गर्न शुरु गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले १५ दिनभित्र मुआब्जा लिनका लागि सूचना जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले जानकारी दिए ।
दोस्रो खण्डअन्तर्गतको याङ्ग्री र लार्केको पानी लैजानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले याङ्ग्री र लार्केखोलाको पानी मेलम्चीमा मिसाउने गरी बनाएको डिपिआर मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई दिएको हो । यो आयोजना रू. ३० अर्ब खर्च गरेर करीब चार वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको छ ।
गत माघबाट रोकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना (पहिलो खण्ड) को काम शुरु गर्न नयाँ ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । अब आयोजनाको काम डेढ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । सँगै जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम सकेर मेलम्चीको दोस्रो परियोजना थाल्न बोलपत्रमा जाने योजना बनेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । रासस
मेलम्चीका आपूर्तिकर्ता र मजदूरको रकम : ‘रू. १ अर्ब ६७ करोड भुक्तानी हुन बाँकी’
मेलम्ची आयोजनाका सहायक ठेकेदार, मजदूरलाई सीएमसीको जफत रकमबाटै भएपनि भुक्तानी दिन निर्देशन
मेलम्ची खानेपानी आयोजना : ३ दिनभित्र रकम दाबी गर्न आग्रह